Layli: Ma qabtaa maskax olimbik? - BBC News Somali
Layli: Ma qabtaa maskax olimbik?
Ma leedahay maskax cayaaryahan Olimbik?
Bal ogow haddii aad leedahay maskaxda loo baahan yahay sida dahab loogu guulaysto, mise waxaad tahaytahay qof Oloombigga iskaga riyooda?
Meeqa jir ayaad tahay?
Waa inaad u guurtaa browser-kii ugu danbeeyay
Taxadar ma leedahay mise ma lihid?
Taxadar badan ma lihi
Waxyar ayaan taxadaraa
Waxaan ahay meel dhexe
Inta badan sax ayaan ahay
Sax ayaan ahay
Haddii aad wax walba taxadar siiso waxay u badan tahay inaad ku guuleysato dhinacyo badan oo nolosha ah, cayaaruhuna ku jiraan. Haddii aadan ahayn waa xilligii aad wax ka qaban lahayd.
110% dadaal ama si fudud?
Mar walba dadaalka ugu badan
Dadaalka ugu badan mararka qaar
Meel dhexe ayaan ahay
Waxaan iska qaataa tii fudud
Si fudud ayaan u qaataa mar walba
Inaad qorshe sare la degsado waxay caawisaa cayaaryahanka, laakiin sidoo kale waa muhiim in aadan nafsaddaada isku adakayn, oo aad ka dhigto waxyaabaha aad filayso kuwo waaqici ah
Ma socotaa mise waa iska joogsataa markuu xaalku adkaado?
Aad ayaan cirkaas u maraa
Waxaad joogtaa khadka bilowga orordka100m ee kama dambaysta, waxaana ku daawanaya malaayiin - ma ka bixi kartaa? weliba si wanaagsan marka uu cadaadiska ku haystaa badan yahay..
Ma waxaad tahay sidii xiddig mise qof xishooda?
Xiddig heesaa ah oo weyn!
Xoogaa waan xishoodaa
Gabi ahaan xishood badan
Inkasta aysan noqon karin tayada ugu wanaagsan,haddana dadka aadka isula-qab-weyn ayaa noqon kara cayaartoy guul gaarta. Laakinse dadka xulka ah ee ciyaaraha fudud kulligood sidaa ma wada noqdaan, waana inaad xasuusato qofna inuusan dooneyn is tus tus.
Tartanka iska gal, ama u gal in aad guulaysato
Uma galayo inaan guulaysto
Waxaan tartanka u galayaa in aan guulaysto hadaan rabo
Waan ku dhex jiraa
Waan jecelahay inaan tartamo
Waan ka helaa inaan tartamo
Ma noqonaysid horyaal Olymbig ilaa aad tartantid oo aad guulaysatid. Inaad tartanka jeceshahay ayaa guul kuu horseedi karta.
Ma adigaa billaaba mise waxaad sugtaa in laguu billaabo?
Anigaa bilaaba maxaan u sugiba
Waxaan jecelahay inaan tijaabiyo
Waxay ku xiran tahay xaalada
badanaa waxaan sugaa in la ii billaabo
marnaba ma billaabo
waxyaabaha wanagsani had iyo jeer kuwa iska sugaa ma helaan.maalinta ka faaiideyso..ka dhig maalintaada haddii aad dooneyso in aad guuleysato
ma waxaad wax u sameysaa inaad ciyaaraha jeceshahay mase in aan wax ku hesho.
in aan wax ku helo ayaa ah tan kali ah ee i dhiirigalisa
in aan wax ku helo ayaa ah tan u weyn ee i dhiirigalisa
labadaba waa u dhexeeyaa
waxaan oran lahaa ka helid halkii aan ka oran lahaa jacayl
jacaylka aan ciyaarta u qabo darteed
Sidee baad niyad ugu haysaa? Inta badan waxaa lagu arkaa xayeesiimaha shaqada, halkaasna sabab ayay ugu taalaa- inaad rabitaan leedahay waa u muhiim si aad u guulaysato.
Waxa kuu fududud iyo waxa kugu adag
Gudaha waxa adag
Waxaan jecelahay inaan is riixo
Dhexdhexaad ayaan ahay
Waan ku faraxsanahay waxa ii fudud
ma in aan sameeyaa ?
waxa u weyn ee loolan kugu haya waa waxa aad muraayadda ka arkayso .haddii ay kaa go'an tahay in aad hagaajiso waxqabadkaaga ama heerka lagaa doonayo,waa dhici kartaa in aad ka gun gaarto.
Ma is dhistaa mise waad is quursataa?
marnaba isma rumeysni
aad isuguma kalsooni
Waan is dhisayaa uun
Haa,waxaan ahay qof isku kalsoon.
aaminka aan isku qabo lama gilgili karo.
isku kalsoonidu waa furaha guusha ciyaaraha..waxaad waydiin kartaa Usain Bolt...laakin waa isbedeli kartaa,taas oo ku xiran duruufaha, sidaa darteed Bolt isaguba marmar bay dhanka kale ula ciirtaa is rumaysnaantiisa.
Indhaha ma ku qabataa mise waad illowdaa?
oo maxay ahayd su'aasha mar kale?
Ilaa intan ayaan soo gaaray
waa dhif in la i sii jeediyo
100% waa jiraa
Weli waad nala joogtaa sow maaha? Ma dhamaysay iyadoon lagu sii jeedin?Maskaxdaada waxay kartaa inay xooga saarto wax kooban markiiba, marka inaad xooga saarto waxa muhiimka ah waa muhiim.
Kaligaa miyaa sameeya mise kaalmo ayaad weydiisataa?
Kaligay ayaan sameeya. Waan samayn karaa
Kaligay ayaan sameeyaa, inteeda badan
Meel dhexda ah ayaan joogaa
Caawinaad ayaan waydiistaa mar mar
Mar walba caawinaad ayaan waydiistaa markaan u baahdo
Qofna meel cidna kuma noola. Ma u baahataa caawinaad? qoyskaaga, saaxiibadaa, asxaabtaada kooxda iyo tababarahaaga- dhamaantood waxay kaa caawin karaan inaad guul gaartid.
Ma hadaf baad leedahay mise wanaag ayaad iska rajaysaa ?
Wanaag ayaan rajeeyaa
Sannad cusub oo kaliya
Xaalkaygu waa meel dhexe
Waxaan leeyahay hadaf
hadafku waa saxiibkay
markaad gaarayso hadafkaaga ,waxaad rumaysan doontaa awoodda aad leedahay, inta aadan ogaanina waxaad gaari doontaa meel ka shisheysa riyadaada ugu weyn.
sidee baad u firfircoontahay ?
cayaartoy oloobmig ah
Ciyaartooy dhab ah
qof jimcisiga jecel
Qof lugeeya maalmaha nasashada
qof maalinta cad riyooda
Waxyaalaha aad ku fiican tahay waa , , iyo .
Laakiin waxaad hagaajin kartaa , , iyo .
Taabo halkan si aad u aragtid iskoorkaaga ilaa 5 Dul istaag si aad u aragtid iskoorkaaga ilaa 5
Tijaabi kediska mar labaad
Kediskan waxaa lagu sameeyey wada shaqaynta Dr David Fletcher oo ah khabiir yaqaanna cilmi mafsiga isboortiga oo ka socda Loughborough University. Su'aalaha waxaa loo diyaariyey inay ifiyaan dabeecadaha maskaxda ee muhiimka u ah in guusha ugu sarraysa laga gaaro tartammada isboortiga.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan sheekadan